Qaybta I., dhibaatooyinkii u Nadiifinta Lugood
Qaybta II. Sida loo Nadiifinta Lugood Library la TunesGo
Qaybta III. Functions kale ee wanaagsan ee TunesGo
Qaybta I., dhibaatooyinkii u Lugood Nadiifinta
Kadib sanado badan oo soo degsado music ka Lugood, degida iyo files dhoofinta ka mid qalab si kale, maktabadda bilaabo raadinaya sida ay tornado ku dhacay. Kuwan raadkaygay Gacanta nadaafadda maktabadda weyn Lugood buuxsamay kuwan raadkaygay in metadata maqan, ID3 tags, daboolida album, oo nuqul ka noqon kartaa mid waqti badan cunta iyo arxan daal. Waxaa jira caqabado badan oo ka soo gudbaya aad marayso ee kulug maktabadda music aad. Dhowr dhibaatooyin soo food saartay dadka inta badan music jecel isticmaala qalab ku qoran yihiin hoos:
• Maktabada weyn ayaa raadkaygay la maqan macluumaad metadata, daboolida album oo ay hogaanka dhammaan faylasha nuqul. Nadiifinta boqol boqol iyo kun kun oo kuwan raadkaygay gacanta noqdo ay noqotey.
• Haddii aan qalab sax ah, waxa uu noqonayaa mid ay adag tahay in la helo album maqan daboolaa.
• Sida nadiifinta maktabadda gacanta ayaa la dhaafi karin aadanaha, buuxinta macluumaadka metadata maqan noqdo way adag tahay.
• Mid ka mid ah dhibaato wayn oo la soo gudboonaado in nadiifinta maktabadda Lugood waa in la soo qaado dalabka saxda ah in xaliyaan arrimaha oo dhan.
• Hawsha Iyadaa ee maamulidda maktabadda daadsan Lugood la fududeeyey karaa iyadoo la isticmaalayo music haboon abaabulka codsiga software.
Hab fiican in aad habayso ururinta warbaahinta waa inay isticmaalaan barnaamij Sidee buu u shaqeeyaa dhulka aad u. Mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee aad maktabadda oo waaaweyn Lugood nadaafadda waa qabanqaabiyaha music TunesGo ee ay Wondershare . Software waxay bixisaa dabacsanaan dheeraad ah ee maaraynta waxyaabaha maktabadda Lugood aad. Labada dadka isticmaala aaladaha Windows iyo Apple karaa download TunesGo iyo u isticmaalaan si ay u caawiyaan in lagu yareeyo xanuunka abaabulka iyo nadiifinta maktabadda. Codsiga ayaa helay xiddiga rating ugu sareeya ka dhamaadka dadka isticmaala ay sabab u tahay fudayd ee u Xeelaysanayn software ah.
Si aad u billowdo nadiifinta maktabadda Lugood aad, waa in aad kala soo bixi iyo rakibi TunesGo Wondershare ka link kor ku siiyo. Sida ugu dhakhsaha badan habka rakibo dhameystiray, codsiga si toos ah syncs la maktabadda Lugood pre-rakibay.
Marka barnaamijka waa set oo dhan, ilaa iyo orodka, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoos ku qoran si aad u nadiifiso maktabadda Lugood aad:
Si loo bilaabo Lugood u auto-.Wadashaqayntaas, riix Switch in Lugood koronto-in button ka dhinaca kore ee midig ee interface ka. Fiiro gaar ah : Marka aad abuurtaan TunesGo Wondershare, gujinaya ka Switch in Lugood koronto-in button noqdo muhiim ah in si in aan bilowno Lugood iyo auto-waafajinta maktabadda music ee labada barnaamijyada. Dhinaca kale, marka aad abuurtaan Lugood oo keliya, ee Wondershare guddi TunesGo waxaa si toos ah bilaabay.
Marka Wondershare barnaamijka TunesGo iyo Lugood surin-in ay yihiin initialized iyo auto-synched, riix Music doorasho hoos Library category ka Murayaad bidix ee interface ka.
Guji ee Maamul Music Library menu ka guddi Wondershare TunesGo ee xaq.
Laga soo bilaabo fursadaha ballaadhiyey, guji nadiifinta Lugood Library.
Marka sameeyo, ka fursadaha balaariyay in kor u soo socda, ee ka dooro mid matalaya qalad ah in aad rabto in aad si uu u xaliyo.
Marka liiska kuwan raadkaygay la hingo gaar ah ayaa la soo bandhigay, waa in aad dooro file (s) in aad rabto in aad si uu u xaliyo.
Ka dib markii la dooranayo, dooran tallaabo / habka ugu haboon ee laga ganaaxi-habayn gaadmada ah ee sida aad proclivity.
Ka dib markii gaadmada ah ku hammin la sameeyay, riix badhanka Save the dhankiisii ​​top-saxda ah ee suuqa kala ah si loo badbaadiyo isbedelada.
Marka aad ku qanacsan tahay isbedelada, waxaad bilaabi kartaa adiga oo isticmaalaya maktabad cusub qaboobay iyo abaabulay.
Fiiro Gaar ah : Waxa aad ku celin kartaa tallaabada 4 dooro xulashooyinka kale balaariyay (hal mar a) la heli karo si calaf-maktabadda Lugood aad sida.
Horumarinta ayaa sheeganaya in Wondershare TunesGo fuliyey hawlaha in Lugood ma sheegi karo. Hawlaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah macluumaadka wareejinta oo u dhexeeya qalabka macruufka badan, diinta files keeno si Apple taageeray qaabab, iwm
Tani qalab multi-functional yimaado la interface ah oo quruxsan oo fududeeyey in uusan haysan qalooca uga yaacday ilaa waxbarasho. Tani waxay u sahlan tahay bilowga ah ay u isticmaalaan TunesGo Wondershare fudayd. Version ayaa maxkamad lacag la'aan ah ee barnaamijka waa laga heli karaa, laakiin waxa uu leeyahay dhowr ka liidato. Sidaa darteed waxaa lagu talinayaa in ay iibsadaan nooca buuxda in ay si buuxda u xusuusan doono. Tirada badan ee hawlaha aad si fudud u samayn kartaa la TunesGo ka dhigaysa u qalantaa bixinta qiimaha yiri.
Ka sokow nadiifinta iyo abaabulka maktabadda music aad, Wondershare TunesGo ayaa dhowr hawlaha kale ee muhiimka. A yar oo iyaga ka mid ah waxay ku qoran yihiin hoos:
• Waxaad si fudud u wareejin karo files warbaahinta ka 'iDevices' in Lugood iyo dib iyadoo la isticmaalayo qalab this.
• Codsiga gelineya inaad si ay u gudbiyaan files u dhexeeya qalabka macruufka adiga oo aan haysan si ay u badbaadin aad kombuutarka laptop.
• The files laga keeno waxaa si toos ah diinta Apple oo ay taageerayaan qaab by barnaamijka.
• kaliya codsiga ma aha kuu ogolaanaysaa inaad abaabulo ururinta music aad, laakiin sidoo kale waxa uu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan playlist kartoo.
• Waxaad waafajinta karaan qalab kasta Apple inay computer desktop adiga oo isticmaalaya TunesGo Wondershare.
• software ayaa aad u saamaxaaya in ay abuuro albums sawir kartoo in aad habayso ururinta sawir hab fududeeyey.
• Waxaad isticmaali kartaa arjiga aad kombuutarka laptop ama computer desktop si ay u abuuraan gurmad ah oo ka mid ah fariimaha iyo xiriirada aad qalab macruufka ah.
Markaan si kooban, Wondershare TunesGo aad bixisaa heshiis fiican oo ah fursadaha marka ay timaado nadiifinta iyo abaabulka waxyaabaha ku saabsan qalab aad. Marka aad ka soo dejisan software ah, waxaad noqon kartaa riixdey ku saabsan Lugood tirka faylasha muhiim ah inta lagu guda jiro synching automatic sida TunesGo u dhan badbaadiyay. Codsigan ee Kacaanka waa xal fiican ee kuwa raadinaya wakhti-badbaadin iyo qalab uncluttered in uu abaabulo xogta iyo warbaahinta content on qalabka ay Apple.
> Resource > Lugood > Habka ugu fudud ee lagu nadiifiyo Lugood